तिमी जितेर पनि हारिदिने मान्छे ! मेरो भागमा खुशी सारिदिने मान्छे !! कसरी भुल्न सक्छु र म? तिमीले लगाएको गुन अह! सक्दिन म तिमीलाई यो भिडमा एक्लै छोडन ! बिर्सिएर तिमीलाई दोबाटोमा पाइला मोड्न ! त्यसैले प्रियतम नभनिदेउ प्रिया मलाई भुलिदेउ भनेर अह! यो हुनै सक्तैन ! हाम्रो प्रेम तुट्नै सक्तैन ! आकाश र बादल […]
म नेपाल बोकेर छातीमा हेर संसार घुमिरहेछु बौलाहा झैं कराउँछु , बर्बराउँछु संधै सपनामा मेरो नेपाल बिपनामा मेरो नेपाल र घुम्छु सर्वत्र यो संसार बोकेर मुटुभरी नेपालीपन बाँड्दै मेरै देशको पहिचान मेरो नेपाल सतिदेवी हैनन मेरो शरिरमा भौंतारिएको छु म तर झर्न दिन्न कदापि मेरो ह्रदयको नेपाललाई अझै उचाल्छु मेरो सगरमाथा म पुगेजति हिमालहरुमा टेकेर […]
पढाइलाइ बिचमा नै छोडेर म काठमान्डौंमा नै एउटा सानो जागिर गर्दै बसेको थिएँ। उनी पनि आफ्नी दिदी संग काठमान्डौँमा नै बसेर अध्यन गर्थिन्। उनको कलेज मेरो कोठा देखि मात्र दस मिनेट टाढा थियो। कलेज नजिकै कोठा भएको ले उनी कलेज आउँदा हरेक दिन जस्तो हाम्रो भेट हुन्थ्यो। उनी बिहानै फोन गर्थिन् अनि भन्थिन “म हिड्न […]
आमाबाबु उता नेपालमा हर्षले बिभोर थिए अमेरिका जाने खुशीयालीमा । यता छोराबुहारी पनि आमाबाबु (सासुससुरा) आउने खुशीमा मक्ख थिए । अमेरिका जाने दिन आइेपुग्यो । बुढाबुढी गमक्क परेर एयरपोर्टतिर लागे।उनिहरुलाई छोराबुहारी,नातिलाई भेट्ने हर्षले आतुर बनाइे रहेको थियो । अमेरिकाको एयरपोर्टमा छोराबुहारी,नाति लिन आएका थिए । पारिवारिक मिलन बडो हर्षोल्लासका साथ भइेरहेको थियो ।अमेरिका पुगेको हप्तादिन […]
३ असार, काठमाडौँ । साहित्य सन्ध्याको ३८५ औँ शृङ्खलामा शनिबार ‘सञ्चार माध्यममा प्रगतिशील साहित्यको स्थान’ विषयमा भएको परिचर्चामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य, वरिष्ठ साहित्यकार एवम् सञ्चारकर्मी रघुजी पन्तले लेखनमा नयाँ विम्ब प्रयोग र राम्रा सिर्जना गर्ने हो भने प्रकाशनको समस्या अहिले नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर राम्रा सिर्जना सम्प्रेषण गर्न […]
गजल १ रुप राम्रो होस्, अभिमान नहोस्, यो सम्भव हुदैन विछोड होस्, मदिरापान नहोस्, यो सम्भव हुदैन । ओठ निचोर्दा दुध आउँने नयाँ दम्पतीको जोडी श्रीमती होस्, सँगै श्रीमान नहोस्, यो सम्भव हुदैन ।। नौ डाडा पारी, सात समुद्र पारी, जहाँ भएपनि आफन्त नै होस्, चिनजान नहोस्, यो सम्भव हुदैन । अल्लारे […]
मलाई माया गर्छु भन्ने ए मान्छे यसरी नै सधै भरि माया गर्न सक्छौ के? बसन्त र बहार मात्रै हैन यो जीवन चल्ने गर्छ यदाकदा होस् उडाउने तुफान, खुसीमा मुहार भरि मुस्कान दिए जस्तै दुख पर्दा काखमा शिर राख्न दिन्छौ के? जुन भनि फुल भनि तिमीलाई बोलाउँला रिसाउदै बिनाकारण चित्त दुखाउला, मिठा-मिठा पहिलेका कुरा मनमा खेलाउदै […]
मेरी प्यारी जान्छेउ भने जाउ तनि सम्झिदै गर्नु
मेरी प्यारी जान्छेउ भने जाउ तनि सम्झिदै गर्नु । सम्झिनलाई तस्वीर तिमिसँगै छनि सम्झिदै गर्नु ।। आफ्नो भन्दा तिम्रा खुशी ख्याल गर्ने मै हो क्यारे । अहिले तिमि जतिसुकै पराई भए रनि सम्झिदै गर्नु ।। नयाँ मान्छे नयाँ घर देखि भुल्यौ भने पाप लाग्ला । तिमिले बेलाबेला यो अनुरागलाई पनि सम्झिदै गर्नु ।। बिरोधमा छ […]
तँलाइ यो भन्दा कस्ती चाहिने?
काठमाण्डौँमा नै कोठा लिएर बस्थेँ म। अस्ट्रेलिया जाने तयारी हुँदै थियो मेरो। भर्खरै फेसबुकको चलन आएको थियो। कहाँबाट हो, ऊ एड भएकी थिइ म संग। ऊ हरेकदिन जसो फेसबुकमा फोटा हालिरहन्थी। फोटा हेर्दाहेर्दै म आकर्षीत भएको थिएँ ऊ तर्फ। एकदिन मैले हिम्मत गरेर “हाइ” लेखेको थिएँ म्यासेजमा। उसले भाउ नखोजी रिप्लाइ गरेकी थिई । हो! […]
आठ साहित्यकारलाई सम्मान गरिने
३१ जेठ, काठमाडौँ । नोबेल साकोस साहित्य प्रतिष्ठानले यस वर्ष नेपाली साहित्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका आठ साहित्यकारलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका संरक्षक एवं वरिष्ठ समालोचक युवराज मैनालीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले आठ साहित्यकारलाई पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्न लागेको हो । सम्मानित हुनेहरुमा हरिभक्त मीना साहित्य सम्मान काठमाडौँका विजय चालिसेलाई तुजाखग साहित्य सम्मान काठमाडौँकै […]
मेरो सन्सार पनि तिम्रै जस्तो छ
हो साथि म अहिले भूतकालमा बाचिरहेको छु तिमीले अस्ति देखेको सन्सार म आज देख्दैछु तिमीले हिजो भोगेको जीवन मैले भोलि भोग्न पाए म एक्काइसौ शताब्दी टेकेको मान्नेछु म आजभोली यो बाटो नपुगेको सभ्यतामा बासि अखवारका पन्ना बाट ताजा समाचारहरु छान्दैछु तिम्रो र मेरो जीवनमा यत्ति फरक म सोच्न सक्दिन किन तिमि उचाइमा छौ किन म […]
दुबै मिली घर चलाउला, भैंसी पालौ कालु
दुबै मिली घर चलाउला, भैंसी पालौ कालु , बाझिएका ति खेतबारिमा, मल हालौ कालु !! नजाउ भो बिदेश तिर, गाउमै केही गरौला , खनि खोस्री खेत बारीको, माटो गालौ कालु !! मिहेनत गर्दै यही गाउमा, सुन फलाउला हेर , हात बढाउछु साथ देउ, पाइला चालौ कालु !! तिमी बिनाकी एक्ली म, सक्ने छैन रमाउन […]
हजुरलाई छोडेर गइदिन्छु !
उसलाई रिसाउन ठुलो कुरै चाहिन्न थियो। कहिले एकपटकमा फोन नउठाउँदा ऊ रिसाइदिन्थी। कहिलेकाहीँ उसको म्यासेज एकैछिन रिप्लाइ गर्न ढिला हुँदा ऊ अघी मुख फुलाइ सक्थी। उसलाई भेट्न जाँदा उसले भनेको कपडा लगाएर गएन भने त ऊ घन्टौँ सम्म बोल्दै नबोली बस्थी। मलाइ ऊ रिसाएको पनी मन पर्थ्यो। जब ऊ मलाइ आँखा तर्दै नाकका पोरा फुलाउँथी, […]
३० जेठ, काठमाडौँ । वरिष्ठ कलाकार भीमबहादुर थापाको ९३औँ वर्षका उमेरमा आज बिहान २ बजे निधन भएको छ । लामो समयदेखि छाती, फोक्सोलगायत समस्याबाट ग्रसित थापाको घरमा नै निधन भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ । थापाले थुप्रै चलचित्र, टेलिचलचित्र र रेडियो नाटकमा समेत अभिनय गर्नुभएको थियो । उहाँले दुई वर्ष बेलायती सेनामा काम गरी पछि […]
तिमी सँग मनको कुरा खोल्न मनै छैन
तिमी सँग मनको कुरा खोल्न मनै छैन, माया -प्रेम सत्ते कसम घोल्न मनै छैन !! नभएका कुरा पनि गर्छौ अरे नानाभाती, खासै मलाई तिमीसँग बोल्न मनै छैन !! रिसाएनी रिसाऊ तिमी फकाउदिन हेर, खुशी पार्न तिम्रा पाऊ मोल्न मनै छैन !! देखावटि माया तिम्रो मुटु जलाइदिन्छ, खाटा बस्या घाऊ फेरी पोल्न मनै छैन !! […]